I-Influ2: Ipulatifomu Yokukhangisa Ese-Akhawunti Eyakhelwe Kumuntu (ABM) | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJuni 1, i-2021 NgoLwesibili, ngoJuni 1, i-2021 Douglas Karr
Ama-Akhawunti ungathathi izinqumo, abantu do. Ukumaketha okusekelwe ku-Akhawunti okuphumelelayo (ABM) Uhlelo lulandela ama-akhawunti ezingeni lamasu kepha lukhuluma nabantu abasezingeni lokusebenzisa. I-Influ2 ichaza lokhu njengohlelo lwe-ABM lokuxazulula okuphezulu lapho izici ezibalulekile zifaka:
Shayela eqenjini lokuthenga. Dlulela ngale kokukhetha ama-akhawunti ahlosiwe: cwaninga abenzi bezinqumo abathile abandakanya amaqembu wokuthenga ama-akhawunti wakho oqondisiwe. Bheka kwincazelo eqhubekayo ye-ICP yakho ukuhlanganisa uhlu lwabenza izinqumo ofuna ukubalandela ohlelweni lwakho lokuxazulula okuphezulu lwe-ABM.
Imilayezo eyenziwe yaba ngeyakho. Amandla wokukhuluma nabantu abathize athatha ukwenza kwakho ngokwakho ezingeni elilandelayo. Abaphathi beJunior bacabanga ngokwehlukile kubaphathi be-C-level. Sebenzisa ulimi olufanele ukuletha imiyalezo efanelekile kumuntu ohlukile.
Sebenzisa iziteshi zokuxhumana ezisuselwa kumuntu. Amathuluzi wokuthuthukisa ukuthengisa asuselwa ku-akhawunti afana ne-Outreach noma i-Salesloft athathe isikhundla semikhankaso ebhekiswe kakhulu kuma-imeyili yokwenza ukuxhumana kube okwomuntu uqobo. I-Influ2 yathuthukiswa ukwenza ukukhangisa okwenziwe kwaba ngokwakho ngezinga elifanayo.
Ukuthinta uhambo lwamakhasimende amaningi. Sebenzisa amasignali wokuzibandakanya asuselwa kubantu ukwakha ohambweni oluyinkimbinkimbi lokuthinta okuningi. Ukuchofoza kusikhangiso sombiko kungadala i-imeyili enesixhumanisi sokulanda umbiko. Umuntu onentshisekelo njalo esihlokweni esithile angangezwa emkhankasweni ngale ndaba. Abantu abebehambele i-webinar bangathola izikhangiso zababekhona. Ungacabanga ngezinkulungwane zezinkambo zokuthinta ama-multi-touch ezingavulwa nge-resolution ephezulu ye-ABM.
I-Influ2: Ukukhangisa Okusekelwe Kwamuntu ne-ABM
Ithonya2 iyipulatifomu yokumaketha esekwe kumuntu yabakhangisi be-B2B, futhi ibhekela ukungahambisani okuyisisekelo kwe-orchestration phakathi kwemisebenzi yokukhangisa nokuthengisa. Iletha ukumaketha kokuqukethwe okusebenzayo, futhi idala ubudlelwano obuzuzisayo namakhasimende okuholela kwizivumelwano ezivaliwe.
With Ithonya2 Isinyathelo ngasinye sohambo lwamakhasimende (kusuka ekuqwashiseni ngomkhiqizo we-top-of-the-funnel kanye nezigaba zokukhiqizwa kwesimangalo kuya ekuthengiseni nasemizamweni yokugcinwa kwamakhasimende) siqiniswa ukukhangisa okubhekiswe mathupha. Nge-Influ2, amabhizinisi akwazi ukwenza lokhu:
Ukuqondiswa Kwezinqumo Ezikhethiwe - Khetha abantu abafanelekile kuma-akhawunti aqondisiwe ukuze ubone ukukhangisa kwakho. Xhuma i-CRM yakho noma isoftware ezisebenzisayo yokumaketha ukuvumelanisa ukukhomba kwakho nokuthengisa noma ifaneli yokukhangisa. I-Influ2 inikeza ukuhlanganiswa nayo yonke i-CRM enkulu kanye nesoftware yokuthengisa ezenzakalelayo, njengeSalesforce, iHubSpot, iMarketo, i-Outreach, nokuningi.
Yenza kube ngokwakho kumuntu womthengi - Dala imilayezo embalwa eyahlukene yama-personas ahlukene ngaphakathi kwe-akhawunti eyodwa. Yigcine ihambisana nomsebenzi womuntu noma indawo yomsebenzi wakhe. Ubungeke ukhulume ne-VP yokumaketha ngendlela efanayo obuzokhuluma ngayo nomqondisi we-HR, ngakho-ke kungani ungabakhombisa isikhangiso esifanayo?
Landelela ukuzibandakanya kwesikhangiso ngakunye - Konke okuvelayo, chofoza, vakashela, kanye / noma ukuzibandakanya kuyisignali yenhloso. I-Influ2 ikuvumela ukuthi uzilandele zonke ngokwabantu nomuntu. Sebenzisa le datha ukuze ubeke phambili ukuze uthole ukuqonda okungcono kokuthi umlayezo wakho uhilela kanjani i-akhawunti ethile nabantu abakule akhawunti.
Khomba Okuqondiwe Okulungele Ukuthengwa Onamagoli Okuziphatha - Ukushaya amagoli ngokuziphatha kukuvumela ukuthi uveze amathemba okulungele ukuthengisa nama-akhawunti obungeke uwuqaphele ngenye indlela. I-Influ2 ilinganisa umthelela wesikhangiso sakho kuwo wonke umuntu obhekise kuye bese uyiguqula ibe yisikolo sokukhomba ukuze ukwazi ukubona kalula imikhondo efanelekile ngokubaluleke kakhulu. Uma umuntu echofoza isikhangiso sakho amahlandla amabili, bese echitha ngaphezulu kwamasekhondi ayi-120 ekhasini lakho lokufika bese ebuyela kuwebhusayithi yakho amahlandla amabili kungakapheli isonto elilodwa, lokho kuyisignali enamandla yokuthi umuntu unentshisekelo futhi uzimisele ukukhuluma. I-Influ2 ilandelela konke lokhu kuhlangana futhi ikuhumushele kumamaki wokuziphatha ukuze ithimba lakho lokumaketha nelokuthengisa likwenze.
Ukukhangisa okususelwa kubantu kusisiza ngokuqinisekisa ukuthi ngqo abathatha izinqumo be-B2B bayafinyelelwa ngaphambi kokuzibandakanya kokuthengisa, okuqhuba impumelelo elinganisekayo ngokwandisa amazinga okuphendula kwimizamo ephumayo yokuthengisa.
UStephen Ngo, Umphathi Wokukhula Kwedijithali, Inzuzo
Ithonya2 isebenza kuyo yonke imidiya emikhulu, kufaka phakathi i-Facebook, i-Twitter, i-LinkedIn, i-Yahoo, ne-Google Ads.
I-Disco Use Case
Njengoba imicimbi engaphakathi kwabantu ikhanseliwe nezinombolo zocingo zasehhovisi ezingasebenzi ngenxa yobhadane, umholi wezobuchwepheshe bezomthetho IDISCO bathwale kanzima ukufinyelela izethameli abazifunayo - abameli neminyango yezomthetho yezinkampani - futhi babike ukubandakanyeka kwezikhangiso.
Isu elisha lokumaketha elisuselwa kumuntu elenziwe yi-Influ2 lenze i-DISCO ikunqobe lokhu futhi ingene phambi kwamakhasimende okungenzeka ukuthi asebenza kakhulu. Phakathi kukaSepthemba 2020 kuya kuMashi 2021, iDISCO ikwazile ukufinyelela ngaphezu kwezinhloso ezingama-30,000 kuma-akhawunti angama-24,000. Okuvelile okungama-548,805 kukhiqize ukuchofoza okungu-794, ukuvakashelwa okungama-497 futhi kwaqhuba amathuba angaphezu kuka-2,000 2 nabenza izinqumo. IDISCO iphinde yaxhumanisa iSalesforce nepulatifomu yakwa-InfluXNUMX ngakho-ke ukuhola kuhambe kwaqonda ngqo ekuthengisweni.
Hlela Idemo ye-Influ2
Tags: abmukumaketha okusekelwe ku-akhawuntiukukhangisa isikhangisoizikhangiso ze-facebookizikhangiso ze-googleukukhangisa kwe-googlenomandlaizikhangiso ze-linkedinumlingisiukuqondiswa komuntuukuzenzelasalesforceizikhangiso ze-twitterizikhangiso ze-yahoo